Madaxweyne Xasan oo gaaray Kenya kana qeybgelaya shir xasaasi ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 1 September 2014 2 September 2014
Mareeg.com: Madxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa lagu wadaa in uu halkaas kaga qeyb galo kulan looga hadlayo arrimaha waxa loogu yeero argigixisada oo hogaamiyayaasha Afrika 2-da bishaan uga furmaya dalka Kenya.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya, Danjire Maxamed Cali Nuur (Ameeriko) ayaa sheegay in wafdiga Madaxweynaha uu ka midyahay Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo mas’uuliyiin kale ay ka qeybgeli doonaan kulan berri Madaxda Afrika uga furmaya Nairobi, kaasoo uu ku casuumay Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta.
“Shirka waxaa looga hadli doonaa la dagaallanka argagixisada iyo sida ay hogaamiyeyaasha Afrika uga qeyb qaadan lahaayeen sidii argagixisada looga cirib tiri lahaa guud ahaan Qaaradda Afrika, oo dhibaatooyin ku haya bulshada Qaaradda ku dhaqan” ayuu yiri Danjire Cali Ameeriko.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Wafdigiisa ay ka soo laabtay dalka Turkiga, halkaasi oo ay dhawaan kaga qeyb galeen xafladdii caleemo saarka Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan.